ကျေးဇူးတင်ခြင်းမှဆုတောင်းခြင်း - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2021-03 > ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထဲကဆုတောင်းပဌနာ
အထူးသဖြင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းသော့ခတ်ခံထားရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုကြာကြာမသွားနိုင်ပါ။ ဒီတပတ်ရဲ့ဘယ်နေ့ကိုမှတ်မိဖို့တောင်ခက်နေတယ်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်အထူးသဖြင့်ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာသည်မနာလိုမှုနှင့်ကြုံတွေ့ရလျှင်သို့မဟုတ်ငါ ၀ န်ခံသည်။
Ich bin kein Experte für Gebete und tatsächlich ist es so, dass es mir oft schwerfällt zu beten. Damit ich überhaupt einen Anfang finde, bete ich oft die ersten Verse wie von diesem Psalm: «Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen» (Psalm 103,1-3) ။
အဲဒါကငါ့ကိုကူညီပေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆာလံအစမှာငါကငါ့ကိုယ်ငါမေးတယ်၊ ဒါဝိဒ်ကဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေတာလဲ။ ဆာလံသီချင်းအချို့တွင်ဒေးဗစ်သည်ဘုရားသခင်အားတိုက်ရိုက်ပြောခဲ့သည်၊ အခြားအခြေအနေများတွင်သူသည်လူများကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားပြီးဘုရားသခင်အားမည်သို့ပြုမူရမည်ကိုလမ်းညွှန်ပေးသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါဝိဒ်ကပြောတယ်၊ ငါ့ဝိညာဉ်၊ ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းပါ။ ထို့ကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်သူ့ကိုယ်သူစကားပြောပြီးဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရန်ချီးမွမ်းရန်သူ့ကိုယ်သူသတိပေးသည်။ သူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသူ့ဝိညာဉ်ကိုပြောပြဖို့လိုတာဘာကြောင့်လဲ။ သူကလှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့နေလို့လား။ လူအများစုကသင့်ကိုယ်သင်စကားပြောခြင်းသည်စိတ်ကျရောဂါ၏ပထမဆုံးလက္ခဏာဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်ဤဆာလံကျမ်းအရ၎င်းသည်ဝိညာဉ်ရေးရာကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သည်။ တခါတရံမှာငါတို့ကငါတို့ကိုဆက်သွားဖို့လှုံ့ဆော်ပေးဖို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချော့ဖို့လိုတယ်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ဒါဝိဒ်ကဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးတော်မူတယ်ဆိုတာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဒါဝိဒ်မှတ်မိပါတယ်။ ယေရှုမှတဆင့်ဘုရားသခင်၏ရက်ရောသောကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သောကောင်းချီးများစွာကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ကူညီပေးသည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူ့ကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရန်ချီးမွမ်းလိုသောဆန္ဒနှင့်ပြည့်စေသည်။
ငါတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပြီးငါတို့အားလုံးကိုရောဂါတွေကနေကုသပေးတဲ့သူကဘယ်သူလဲ။ ဘုရားသခင်သာလျှင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကောင်းချီးများသည်သူ့ထံမှဖြစ်သည်။ သူ၏သနားကြင်နာမှုနှင့်သနားကြင်နာမှုတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မှားယွင်းမှုများကိုခွင့်လွှတ်သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသနားကြင်နာမှုနှင့်ရက်ရောမှုတို့ဖြင့်ဂရုစိုက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကုသပေးသည်။ ဒါကလူတိုင်းနဲ့ကိစ္စအားလုံးမှာသက်သာပျောက်ကင်းလိမ့်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါသူကငါတို့ကိုသနားပြီးကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်တယ်။
ကပ်ရောဂါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ကျန်းမာရေးသည်မည်မျှအန္တရာယ်ရှိသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာသည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝေဒနာရှင်များပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ချစ်ရသူများသို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်မှုများသေဆုံးသွားသည့်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုယေရှုအားဖြင့်ခွင့်လွှတ်သည်ကို သိ၍ ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသည်။ မရ။ ဒီအရာတွေရဲ့မျက်နှာမှာငါအရင်တုန်းကဒီလောက်စာရင်းမ ၀ င်တဲ့နေရာမှာဆုတောင်းဖို့အားကြီးတဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုခံစားရတယ်။ ဒါကမင်းကိုလည်းဆုတောင်းဖို့လှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။